A Social Media Marketing Atụmatụ na usoro 6 dị mfe | Martech Zone
Mgbasa mgbasa ozi na-aga n'ihu na-aga n'ihu dị ka ịkparịta ụka n',ntanet, ige ntị, mbipụta, nkwado, na nkwalite maka ngwá ọrụ. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-aga n'ihu, na-enyekwu ụzọ na ebumnuche dị elu nke na-ebelata ọnụahịa ọ bụla. A na-ehiwe nyiwe maka ige ntị, ịzaghachi, mbipụta, mmụba, na ime mkpọsa ma na-aga n'ihu na-enye nnukwu onyinye maka azụmaahịa.
Site na ọtụtụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta dị ugbu a, ọ dị mfe inwe mgbagwoju anya ma ọ bụ ejighị n'aka etu esi esi zụlite usoro mgbasa ozi mmekọrịta na ọha mmadụ jikọtara taa. Netwọk mgbasa ozi mmekọrịta bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji kwalite akara gị n'ụwa niile. Site na ndị ọrụ karịrị ijeri 2.7 n'ụwa niile, enweghị mgbagha na mgbasa ozi mmekọrịta na-enye nnukwu ikike ma nwee ezigbo mmetụta na azụmaahịa 'ala ala. Emedia okike
Anyị amụtala ọtụtụ ihe n'ụzọ niile. Maka ọtụtụ akụkụ, ụdị na-amụta na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ụzọ dị mkpa iji wuo mmata na ịnya ụgbọ ala; ma ọ bụghị mgbe niile kachasị mma maka ahịa ahịa. Anyị makwaara na mgbasa ozi mgbasa ozi emeela ka afọ ojuju ndị ahịa gaa na nnọkọ ọha na eze ebe ndị ahịa anyị nwere ike ịgụ gbasara mmezigharị nke otu. Ọ bụ injin dị ike maka ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa, mana ọ nwere ike iwe iwe ma dị oke ọnụ na-enweghị nnukwu usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta.
Kedu ihe bụ atụmatụ mgbasa ozi mgbasa ozi?
Iji mepụta nsonaazụ dị mma, ịchọrọ atụmatụ mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta gị na ebumnuche azụmahịa gị. Ọ kwesịrị ịgụnye ọnọdụ gị dị ugbu a na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta, otu ị si ekwu okwu megide asọmpi gị, ebumnuche ebumnuche n'ọdịnihu, yana usoro niile na ngwaọrụ ị ga-eji ruo ebe ahụ.
Atụmatụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ dịka ụkpụrụ maka omume gị niile, yana ụzọ iji chọpụta ma mbọ gị ọ na-enweta.
Atụmatụ Mgbasa Ọha na Social
Mepụta ebumnuche na ebumnuche mmekọrịta gị - ijide n'aka na ha kwekọrọ na usoro azụmaahịa gị niile iji hụ na atụmatụ gị na-ebute nsonaazụ azụmaahịa ka ukwuu.
Mee nyocha mgbasa ozi na-elekọta mmadụ - nweta nseta nke steeti mgbasa ozi mmekọrịta gị ugbu a ma jiri ya tụnyere ndị asọmpi gị.
Mepụta ma ọ bụ bulie profaịlụ mgbasa ozi gị - na nyocha gị zuru oke, oge eruola ka ị mee ka mgbasa ozi mgbasa ozi gị ka mma.
N'ike mmụọ nsọ maka itinye aka na mgbasa ozi gị - lelee ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ndị asọmpi na profaịlụ metụtara ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji hụ otu ị ga - esi gosi ọdịiche dị n'etiti ọnụnọ gị.
Zụlite atụmatụ ọdịnaya na kalenda ederede - ikenye na ịkekọrịta ọdịnaya dị mkpa mgbe niile bụ akụkụ kachasị mkpa iji hụ na ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta.
Sochie, nyochaa, ma melite atụmatụ mgbasa ozi mgbasa ozi gị - nlekota na nyocha oge niile di oke mkpa dika inwe ikike itinye aka na ahia ahia.
Lelee nkọwa, ndụmọdụ na ndụmọdụ niile na ozi a sitere na Emedia Creative, Etu aga - esi wepụta usoro mgbasa ozi ọhaneze na - echekwa maka ebumnuche azụmahịa.
Tags: ọdịnaya ederedeemedia okikengwa ngwanyocha mgbasa ozisoshal midia ọdịnayantinye mgbasa ozi na-elekọta mmadụSocial Media Marketingatụmatụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụusoro mgbasa ozi mgbasa oziatumatu mgbasa oziprofaịlụ mgbasa oziusoro mgbasa ozi mmekọrịtaihe mgbaru ọsọ nke mgbasa ozi
Ihe Gị Banyere Anyị Page Soro Ndị a Omume Kasị Mma?
Sep 13, 2017 na 1: 45 AM
Nnukwu Infographic .. Daalụ !!